भद्रगोल शिक्षा नीति- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले केही दिनअघि गरिमामय व्यवस्थापिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोलेका वाक्य हुन्, ‘भारतले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ  ।
यस भनाइको मतलब के हो ? गिरीले नेपाललाई भन्दा छिमेकी देशलाई काखी च्यापेको कुरा २०४६ साल, १२ बुँदे लगायतमा गरेका कारबाही र उनले बोकेर नेपाल ल्याएका छिमेकी नेताहरूबाटै प्रस्ट भइसकेको छ । संसद भवनभित्र सांसदहरूका अगाडि र आम नेपालीले देख्ने, सुन्नेगरी बोलेका माथिका शब्दहरूलाई सिधा भाषामा अर्थ लगाउँदा त्यो ‘राष्ट्रघात’ नै हो । त्यस्ता शब्दहरू कुनै भारतीय, अमेरिकी, बेलायती, चिनियाँ सांसदले तिनका मुलुकमा बोलेका भए जेल हाल्दैन थिए ? अनि नेपालका सुरक्षा अङ्गहरू के हेर्छन् ? यो राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती हो कि होइन ? जनताले मत दिएका र तिनकै करबाट पालिएका यस्ता सांसदले ‘फिफ्थ कलमनिस्ट’को काम गर्छन् भने यो देशले गिरीमाथि राष्ट्र विप्लवको मुद्दा लगाउनु नपर्ने कारण के छ ? यिनले नेपाली राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेका छन् । यो क्षम्य हुन सक्दैन ।